Somaliland oo sheegtay in Imaaraadka Weerar ka qaadi karo Saldhiga Berbera Iyo Waraysi uu Bixiyey Sacad (Muuqaal) - Hablaha Media Network
Somaliland oo sheegtay in Imaaraadka Weerar ka qaadi karo Saldhiga Berbera Iyo Waraysi uu Bixiyey Sacad (Muuqaal)
HMN:- Sarkaal sare oo Somaliland ka tirsan ayaa jimcihii shalay sheegay in Ciidamada ka socda Imaaraadka Carabta ay sida ugu dhaqsiyaha badan diyaaradahooda dagaalka ay ka duuli doonaan Saldhigga Berbera.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Somaliland Sacad Cali Shire ayaa sheegay in Imaaraadka ay saldhig Berbera u isticmaali karaan ujeedo kasta oo ay ku jiraan, tababarka, ilaalinta badda iyo howl galada milateri.
Berbera ayaa 250 KM u jirta koofurta Yemen, halkaasoo isbaheysiga uu hoggaaminayo Sacuudiga oo ay ku jirto Imaaraadka Carabta dagaalo kula jiraan Jabhadda Xuutiyiinta.
Saldhigga ayaa wali ku socda dhisme, hase ahaatee maraakiibta dagaalka ee Imaaraadka Carabta ayaa mar dhoweyd ku soo dhowaaday biyaha Berbera, gaar ahaan meel u dhow Dekeda oo dhowaan lagu wareejiyay Shirkadda DP World.
Wareysi uu siiyay Wasiirka Arrimaha Dibadda Somaliland Laanta afka Soomaaliga ee VOA, isagoo ku sugan Washington ayaa difaacay dekeda iyo saldhiga milateri ee lagu wareejiyay Imaaraadka, kaasoo bishii February uu ansixiyay Baarlamaanka Somaliland.
HALKAN KA DAAWO MUUQAALKA WARAYSIGA WASIIRKA
Mr Sacad Cali Shire ayaa sheegay in uusan aaminsaneyn in saldhiga milateri ee Imaaraadka ka isticmaalayo Berbera uu khilaaf ka abuuri karo gobolka, waxaa uu tilmaamay in horay Imaaraadku saldhig milateri ugu lahaayeen Dekeda Casab ee dalka Eritrea, taasna aanay wax khilaaf ah ku keenin Gobolka, isagoo intaa ku daray in saldhiga cusub ee Berbera aanu wax caqabad iyo khilaaf abuuri doonin.